वाम एकताका लागि दोस्रो तहका नेता किन शंकालु ? – MEDIA DARPAN
वाम एकताका लागि दोस्रो तहका नेता किन शंकालु ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ९ पुष २०७४, आईतवार ०३:३६
काठमाडौँ, ९ पुस- निर्वाचनमा गठबन्धन गरी पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको औपचारिक पहल सुरुसँगै सिद्धान्तभन्दा नेतृत्वमा बढी विवाद देखिएको छ।
दोस्रो तहका नेताहरू विवादित अभिव्यक्तिमा केन्द्रित भइरहँदा एकताकाका लागि गठित पार्टी एकता संयोजन समितिको शनिबार बस्ने तय भएको बैठकसमेत बस्न सकेन। माओवादी नेताहरूका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल काठमाडौंबाहिर रहेका कारण उच्चस्तरीय बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ।
तेस्रो तहका नेताहरू भने पार्टी एकताको सहयोगी भूमिकाका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनीहरू तत्काल पार्टी नेतृत्व तहमा नपुग्ने र एकता हुँदानहुँदा पार्टी पोजिसनमा खासै फरक नपर्ने भएर पनि पार्टी एकतामै बढी केन्द्रित छन्, राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
‘एमालेले फोरमसँग तालमेल गर्न नसकेपछि हामीसँग आयो’- प्रचण्ड
यसकारण एमालेसँग सत्तामा जाँदैन फोरम- उपेन्द्र यादव